E-Mail nwere ike ịbụ nkà na ụzụ oge ochie tụnyere mgbasa ozi ọha mmadụ, mana ọ ka mma karịa na ị natara ozi gị. N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi dị iche iche na-akụkarịkwa ụda. N’aka nke ọzọ, E-Mail na-anọ n’ime igbe mbata nke ndị na-ege gị ntị, ọ gaghị apụkwa ma ọ bụrụ na eleghara ya anya.
Na Seite na E-Mail, ị gaghwe enwe ihe gbasara njide agwa, oyiyi nkọwa, ụgwọ ruru, ma ọ bụ okwu mkparị.
Mere bụ ya bloßes Ego ji dị na listi ahụ. Nke a bụ otu esi nweta ndepụta gị na-arụ ọrụ maka gị.
1.1 1 – Ụdị Nwepụ E-Mail
1.2 2- Werbegeschenke na Ọdịnaya Nwelite
3 Ngwaọrụ Autoresponder
N’ụzọ doro anya, iji mee ego ọ bụla site na email gị autoresponder, ị ga-ebu ụzọ nweta ndị debanyere aha.
Mana ọ bụghị naanị ndị debanyere aha ọ bụla – naanị ọ chọrọ ndị debanyere aha ndị nwere mmasị na ihe ị nwere inye. Ọ dị mkpa ilekwasị anya mgbalị gị na ịmepụta listi àgwà ndị na-agụnye ndị na-ege gị ntị.
1 – Ụdị Nwepụ E-Mail
Chee echiche iji otu onye na-enweghị iwe, enyi-enyi na-emepụta ụdị iji nweta ọbụna ndị ọzọ ndị debanyere aha. N’ebe a na WHSR, anyị na-eji Ninja Popups. W nwere ike zụta Ninja Popups na CodeCanyon. Anyị na-akwado OptinMonster, ein WordPress ngwa mgbakwunye nwere ike ịmepụta mara mma ọpụpụ na ụdị ụdị.
2- Werbegeschenke na Ọdịnaya Nwelite
Mgbe ị na-enye freebies chọrọ ego ihu oge n’ihu, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọpụta na ọ na-enyere alias ịgbakwụnye mmelite email ha.
Nwepu ego gị kwesịrị ịbụ kpọmkwem ihe ndị na-eleta anya gị chọrọ ibudata. Ọ bụrụ na nnwere onwe gị na-adọta ndị na-egeghị ntị, ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịdebanye aha gị. T freelee iji ndị na-agụ akwụkwọ na-enyocha ịchọta kpọmkwem ihe Werbegeschenke na-adọrọ mmasị maka ndị na-ege gị ntị pụrụ iche.
Iji chebaa email gị autoresponder, ị ga-achọ ihe ị ga-ere.
Njikọ njikọta bụ ụzọ a na-ewu ewu iji jiri ego na-emepụta ndị na-emepụta email. W ke w ji ji ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ị ị ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ.
I nwekwara ike inweta ego site n’inweta ngwaahịa na ọrụ gị. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ọmụmụ na ebook, bụ ụzọ nkịtị iji nweta ego na-enweghị ego. Zie bụ ezie na ha chọrọ oge iji nweta ego iji mepụta ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịnọgide na-enweta ego gị.
Na ozi ịmalite gị, ị ga-ewulite ntụkwasị obi na ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na ị na-amalite ma ndepụta gị ka dị ober, atụla ụjọ ịkpọ ndị debanyere aha ịzaghachi na kpọtụrụ gị ozugbo.
Maka ihe kachasị ego, nye ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ na ọnụahịa ihe dị iche iche na usoro gị niile. Naanị n’ihi na email gị nke na-ere ihe $ 500 adịghị arụ ọrụ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-ada mbà na ndị ahụ debanyere aha. Gbalịa ịgbasa usoro ntanetị gị iji nye otu ober ihe $ 50.
N’etiti ndị ọbịa ndị ọzọ E-Mail ahịa ngwá ọrụ, Nọgide na-emechi bụ aha na-abịa mgbe niile (ọ dịghị iwu ọ bụla). E wezụga ọrụ ya n’ahịa ahịa, saịtị ahụ agbasawokwa iji tinye ọrụ ndị metụtara ahịa ahịa ndị ọzọ. Lelee Nlele kọntaktị Tim si na mgbe niile chọpụta ihe.
AWeber bụ ihe na-ewu ewu na listi email nke na-agụnye njirimara na-arụ ọrụ. Ha na-enyekwa ngwá ọrụ E-Mail na-E-Mail ka ndị na-debanyere aha gị nwere ike ịnweta ozi ntanetị ọhụrụ gị, na-eme ka akwụkwọ akụkọ gị kpamkpam.
MailChimp bụ akwụkwọ ozi email na-ewu ewu bụ ndị a ma ama maka ịdị mfe nke ojiji na ezigbo ndebiri (ọ bụghị ịkọ abụ mara mma ha maskottchen). MailChimp na-enye ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na akaụntụ ha akwụ ụgwọ naanị. Site na ngwa ngwaọrụ ha, w nwere ike ịmepụta ọtụtụ ozi ịntanetị maka ndị debanyere aha ọhụrụ, ma ọ bụ ụbụna tinye ozi ịntanetị ka a zitere mgbe ihe ụfọdụ mepụa.
Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ego na-ewepụta ego na-ewepụta oge iji guzobe, ozugbo ha nọ n’ọnọdụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo ego na-enweta ego maka ndị na-ede blọgụ na azụmahịa ndị d n.
Имам само един ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "его дị на ндепụта." Imirikiti
Elə bir şey deyil ki, sadəcə olaraq, nə-ede blọgụ ji sị "ego dị na